I-Chili Piper: Inkqubo yokuCwangciswa okuzenzekelayo yokuGuqula kweNkokeli engenayo | Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 21, 2020 Lwesine, Okthobha 1, 2020 UJason Oakley
Ndizama ukukunika imali yam- kutheni uyenza nzima kangaka?
Le yimvakalelo eqhelekileyo kubathengi abaninzi be-B2B. Ngu-2020- kutheni sisaqhubeka sichitha abathengi (kunye nelethu) ixesha kunye neenkqubo ezininzi zakudala?
Iintlanganiso kufuneka zithathe imizuzwana ukubhukisha, hayi iintsuku.
Iminyhadala kufuneka ibe yeencoko ezinentsingiselo, hayi iintloko zentloko.
Ii-imeyile kufuneka ziphendulwe ngemizuzu, zingalahleki kwibhokisi yakho engenayo.
Yonke intsebenzo kuhambo lomthengi kufuneka ingabinangxabano.
I-Chili Piper ikwi-mission yokuthenga (kunye nokuthengisa) kakhulu kubuhlungu. Sijonge ukuphinda sisebenzise iinkqubo zesenzo ezisetyenziswa ngamaqela eerhafu- ukwenza yonke into oyithiyileyo malunga neentlanganiso, iminyhadala kunye ne-imeyile- ukuze uchithe ixesha elininzi usenza into.
Iziphumo kukuvelisa ngakumbi, amaqondo aphezulu okuguqula, kunye nezivumelwano ezivaliweyo.
Okwangoku sinemigca emithathu yemveliso:
Iintlanganiso zeChili zibonelela ngesona sicwangciso sikhawulezayo somzi mveliso, esona sipheleleyo sokucwangcisa ngokuzenzekelayo kunye nokuhambisa iintlanganiso kuwo onke amabakala omjikelo wobomi wabathengi.
Imeko yoku-1: Ukucwangciswa kokukhokelela kwangaphakathi
ingxaki: Xa ithemba licela idemo kwiwebhusayithi yakho sele sele ingama-60% ngenkqubo yokuthenga kwaye ikulungele ukuba nengxoxo enolwazi. Kodwa ixesha eliphakathi lokuphendula ziiyure ezingama-48. Ngeli xesha ithemba lakho sele liqhubele phambili okhuphisana naye okanye ulibale malunga nengxaki yabo ngokupheleleyo. Kungenxa yoko le nto i-60% yezicelo zeentlanganiso ezingenayo zingabhukishelwa.
isisombululo: I-Concierge-sisixhobo sokucwangciswa kwangaphakathi esifakwe kwiintlanganiso zeChili. I-Concierge ngumcwangcisi we-intanethi odibanisa ngokulula kunye nefom yakho yewebhu esele ikho. Nje ukuba ifom ingeniswe, iConcierge ikulungele ukukhokela, uyihambise kwindawo efanelekileyo yokuthengisa, kwaye ubonise ishedyuli yokuzenzela ngokwakho ukuba ufuna ukubhukisha ixesha- konke kungumcimbi wemizuzwana.
Imeko yesi-2: Ukucwangciswa komntu nge-imeyile
ingxaki: Ukucwangcisa intlanganiso nge-imeyile yinkqubo ephazamisayo, ukuthatha ii-imeyile ezininzi zokubuyela emva kunye nokuqinisekisa ixesha. Ukongeza abantu abaninzi kwi-equation kwenza ukuba kube nzima. Okona kulungileyo, kuthatha iintsuku ukubhukisha ixesha. Okona kubi, umenyiwe uyanikezela kwaye intlanganiso ayikaze yenzeke.
isisombululo: Ukubhukisha kwangoko-iintlanganiso zabantu abaninzi, ezibhukishwe nge-imeyile ngonqakrazo olunye. I-Instant Booker lulwandiso lokucwangciswa kwe-Intanethi (luyafumaneka kwi G Suite kunye ne-Outlook) ezisebenzisa ukubhukisha iintlanganiso ngokukhawuleza nge-imeyile. Ukuba ufuna ukulungelelanisa intlanganiso, bamba nje amaxesha ambalwa eentlanganiso kwaye uzifake kwi-imeyile kumntu omnye okanye kubantu abaninzi. Nawuphi na umamkeli unokucofa elinye lamaxesha acetyiswayo kwaye wonke umntu ubhukishwa. Ukucofa kanye kwaye kunjalo.
Imeko yesi-3: Ukucwangcisela iminxeba ekhokelwayo
ingxaki: Ukucwangcisa i-handoff (aka. Ukunikezela, isiqinisekiso, njl. Njl.) Iintlanganiso yinkqubo yokubuyela umva nokubuya. Inqaku lesandla eliqhelekileyo phakathi kwe-SDR kunye ne-AE (okanye i-AE ukuya kwi-CSM) yintlanganiso ebhukiweyo. Kodwa imigaqo yokuhambisa ekhokelayo yenza ukuba kube nzima ukubuyela kwiintlanganiso ngokukhawuleza kwaye zifuna i-spreadsheet zemanyuwali. Oku kubangela ukulibaziseka kwaye akukho mboniso, kodwa kukongeza umngcipheko wokusasazwa ngokungenabulungisa, imiba yokusebenza, kunye nokuziphatha okungalunganga.
isisombululo: I-Instant Booker-incwadi yokubamba iintlanganiso ukusuka naphi na kwimizuzwana. Ulwandiso lwethu 'lweNcwadi ekhawulezileyo' idibanisa ne-Salesforce, i-Gmail, i-Outlook, i-Salesloft, nokunye okuninzi, ngenxa yoko abahlaziyi banokubhukisha iintlanganiso naphina kwimizuzwana. Izikhokelo zihanjiswa ngokuzenzekelayo kumnini ochanekileyo ukuze reps ibhukishe iintlanganiso zesandla kwikhalenda elungileyo, ngalo lonke ixesha, ngaphandle kokukhangela kwi-spreadsheet.
Cela iDemo yePiper Pemo
Ngeziganeko zeChili, kulula kubathengisi beminyhadala ukuqinisekisa ukubhukishwa kwentlanganiso yangaphambi komnyhadala wentengiso yokuthengisa, ukubekwa ngokuchanekileyo nangokuzenzekelayo kwamathuba aveliswe kwezi ziganeko, kunye nolawulo olungenamthungo lolawulo lokugqibela lokucwangcisa kunye nokufumaneka kwegumbi.
Imeko yoku-1: Iintlanganiso zangaphambi kokuBhukisha
ingxaki: Ukukhokelela kumnyhadala, uninzi lwabathengisi kufuneka bacwangcise iintlanganiso zabo ngesandla. Oku kuthetha ukubuyela umva kunye nokuthumela ii-imeyile ezinethemba lokuzama ukulungelelanisa iikhalenda kunye namagumbi okuhlangana. Lilonke, oku kudala itoni yentloko kunye nokudideka kummeli, kumthengi nakumphathi womsitho- umdlali obalulekileyo ekufuneka elawule amandla egumbi lokuhlangana kwaye azi ukuba ziqhubeka ntoni iintlanganiso, nini. Yonke le nkqubo ihlala ilawulwa kwispredishithi.
isisombululo: Ngeziganeko zeChili, i-rep nganye inelinki yokubhukisha eyahlukileyo abanokuthi babelane ngayo ngethemba ngaphambi komsitho wokwenza ucwangciso kunye nokulungelelaniswa kwegumbi ngenkqubo yokucofa kanye. Iintlanganiso ezibhalisiweyo zongezwa kwiKhalenda yokuNgena-eKhalendeni esembindini esetyenziswa ngabaphathi bemisitho ukulandelela zonke iintlanganiso ezenzeka kumgangatho womsitho.
Imeko yesi-2: Ingxelo yeNtlanganiso yeNdibano kunye ne-ROI
ingxaki: Abaphathi beMisitho (kunye neeNtengiso zeMisitho) bayasokola ekulandeleleni iintlanganiso zomnyhadala kwi-Salesforce kunye nokubonisa umcimbi we-ROI. Ukulandelela yonke intlanganiso kwinkomfa yinkqubo yesikhokelo kubaphathi bemisitho. Bafuna ukuleqa ukuthengisa kwakhona, ukulawula iikhalenda ezininzi, kunye nokugcina umkhondo wayo yonke into ekwipredishithi. Kukwakho neenkqubo zesikhokelo zokongeza intlanganiso nganye kwiphulo lomsitho kwi-Salesforce ethatha ixesha. Kodwa kuyimfuneko ukuze kungqinwe i-ROI.
isisombululo: Imicimbi yeChili idibanisa ngaphandle komthungo kunye ne-Salesforce, ke yonke intlanganiso ebhukishiweyo ilandelwa ngokuzenzekelayo phantsi kwephulo lomnyhadala. Ikhalenda yethu yokungena ikwenza kube lula kubaphathi bemisitho ukuba balandelele imiboniso engekhoyo kunye nokuhlaziya ukubakho kwiintlanganiso kwi-Salesforce. Oku kwenza ukuba kube lula kakhulu ukunika ingxelo kumnyhadala we-ROI kwaye babeke ukugxila ekuqhubeni umsitho omkhulu.
Chili Inbox (okwangoku ikwi-beta yabucala)
Ukufumana amaqela eengeniso asebenzisa i-imeyile ukunxibelelana namathemba kunye nabathengi, I-Chili Piper Inbox ibonelela ngendlela elula, efanelekileyo, kunye nokudityanisiweyo yamaqela okusebenza ngokudibana ngakumbi, ukubonakala kwidatha yabathengi, kunye nokubonelela ngamava abathengi angenaxhala.
Imeko yoku-1: Ukusebenzisana ngaphakathi kwii-imeyile
ingxaki: Ukuthumela i-imeyile ngaphakathi kuyamdaka, kuyadida, kwaye kunzima ukulawula. Ii-imeyile ziyalahleka, kuya kufuneka ujikeleze amakhulu eCC / Phambili, kwaye uphele ngokuxoxa ngokungaxhunyiwe kwi-intanethi okanye kwincoko apho kungekho nto ikhoyo kwaye kungekho nto ibhaliweyo.
isisombululo: Amagqabantshintshi ebhokisi engenayo-intsebenziswano ye-imeyile ngaphakathi kweChili Inbox. Ngokufana nendlela osebenzisana ngayo noGoogle kuXwebhu, inqaku lethu leBhokisi yeBhokisi engenayo likuvumela ukuba ubalaselise isicatshulwa kwaye uqalise incoko namalungu eqela lakho kanye kwi-inbox. Oku kwenza ukuba kube lula ukuvula amalungu eqela ukuba anike ingxelo, uncedo, imvume, uqeqesho kunye nokunye.
Imeko yesi-2: Ukukhangela ulwazi lweakhawunti
ingxaki: Ukwazi ngokwenyani okwenzekileyo ngeakhawunti ngaphambi kokuba uzuze njengelifa kuthatha iiyure zomsebenzi odinisayo ukukhangela kwimisebenzi ye-Salesforce, ukuphonononga imisebenzi kwizixhobo zeNtengiso, okanye ukuhluza iiCCs / Phambili kwi-inbox.
isisombululo: Ubukrelekrele be-akhawunti-inqaku lobukrelekrele be-imeyile ngaphakathi kwi-Chili Inbox Ngebhokisi engenayo yeChili, unokufikelela kwimbali ye-imeyile ebanzi kwiqela kuyo nayiphi na iakhawunti. Inqaku lethu lobukrelekrele beAkhawunti likuvumela ukuba ufikelele ngokukhawuleza kuyo yonke i-imeyile yokutshintshiselana ngeakhawunti ethile, konke okuvela ngaphakathi ebhokisini lakho. Oku kwenza ukuba kube lula ukufikelela kuyo yonke i-imeyile ngomxholo owufunayo.
Malunga neChili Piper
Eyasungulwa ngo-2016, uChili Piper usemishini yokwenza iintlanganiso kunye ne-imeyile ngokuzenzekelayo nangokusebenzisana kumashishini.
I-Chili Piper igxile ekuzenzekelayo iinkqubo ezindala ekucwangciseni nase-imeyile ezibangela ukungqubana okungafunekiyo kunye nokuyeka kwinkqubo yokuthengisa- kukhokelela ekwandeni kwemveliso kunye namaxabiso okuguqula kuyo yonke ifanele.
Ngokungafaniyo nendlela yesiqhelo yolawulo lwangaphakathi olungenayo, uChili Piper usebenzisa imigaqo efanelekileyo ukuze afaneleke kwaye ahambise izikhokelo kwindawo efanelekileyo ngexesha langempela. Isoftware yabo ikwavumela iinkampani ukuba zenze i-handoff ekhokelayo ukusuka kwi-SDR ukuya kwi-AE kunye neencwadi zencwadi ezivela kwimikhankaso yentengiso kunye nemisitho ebukhoma. Ngeendawo zabo ezibekwe ngokulandelayo kwi-imeyile, uChili Piper kutshanje ubhengeze i-Chili Inbox, ibhokisi yokungenayo yokusebenzisana yamaqela engeniso.
Iinkampani ezinje ngeSikwere, iTwilio, i-QuickBooks Intuit, iSpotify, kunye neForrester zisebenzisa iChili Piper ukwenza amava amangalisayo kwizikhokelo zabo, kwaye ukubuyisa, ukuguqula kabini inani lezikhokelo kwiintlanganiso ezibanjiweyo.
tags: Iintlanganiso zencwadiimicimbi yesililiibhokisi yebhokisiIintlanganiso zeliliumbulali wesililii-imeyile ezenzekelayoG SuitegsuitIshedyuli ekhokelayo engenayoUkucwangciswa okungaphakathiunikezelo phambiliUkuhamba kwintlanganiso
UJason Oakley nguMlawuli weNtengiso yeMveliso eChili Piper. UJason ngumthengisi wentengiso onamava onomdla kwimveliso, i-SaaS, ushishino, kunye nempumelelo yabathengi. Kwiminyaka eli-10 esebenza kwindawo encinci ukuya kwinqanaba eliphakathi, uJason unethuba lokubonisa impumelelo kuninzi lwezinto eziphambili zentengiso kunye nemisebenzi yentengiso, emenza ukuba abe ngumthengisi wentengiso onesakhono ofuna ukuqonda lonke uhambo lwabathengi.
Umsebenzi: Qokelela, Guqula, kunye neDatha yokuThengisa yokuThengisa